नेपाल आज | कमजोर सांस्कृतिक, शैक्षिक धरातलका कारण ओली यस्तो बोल्छन् (भिडियोसहित)
कभर स्टोरी अन्तरवार्ता
कमजोर सांस्कृतिक, शैक्षिक धरातलका कारण ओली यस्तो बोल्छन् (भिडियोसहित)
काठमाडौं । प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले नेपालमा माथिल्लो तहका अधिकांश पदाधिकारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममिति नक्कली रहेको दावी गरेका छन् । नेपालआजसँग कुराकानी गर्दै विश्लेषक केसीले यस्तो दावी गरेका हुन् ।
नेपालमा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस पार्ने मुख्य जिम्मेवार नै शिक्षामन्त्री हुने गरेको उनले बताए । अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले शिक्षा क्षेत्र राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा केसीले भने, ‘के आधारमा उहाँले यस्तो भन्नु भएको हो ? शिक्षा क्षेत्रमै रहेर त्यहीँ बसेर राजनीति गरेर मन्त्री आफैं हुनु भएको छ । अहिले शिक्षा राजनीति मुक्त हुनुपर्छ कसरी भन्न सकेको ?’
तरकारी, फलफूलमा विषादी परीक्षणको विषय चर्चामा छ । नेपालमा विष मिसाइएको तरकारी र फलफूल खान जनतालाई विवस पारिएको उनले बताए । नेपाली जनतालाई विष मात्रै होइन, मिति सकिएका औषधि पनि नेपालमै बेचिने र नयाँ औषधिको परीक्षण पनि नेपालीलाई नै खुवाएर गरिँदै आएको केसीको भनाइ छ ।
हामी नेपाली जनता औषत भन्दा तल्लो तहको जीवनस्तर व्यतित गरिरहेका छौं । हामीले राम्रो खाना खान पाउँदैनौं । खाना खान पाउनेले पनि विषादी मिसिएको खानु पर्छ । यस्तो खानेकुरा खानेहरुको दिमागले पनि सिर्जनात्मक सोच्न सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कमजोर शासकीय क्षमता र कमजोर शैक्षिक सांस्कृतिक धरातल भएका कारण पनि उनी शान्त तलाउमा ढुंगा हान्ने गरेको केसीले बताए ।
त्रिविमा पैसामा स्वर्ण पदक विक्री हुँदो रहेछ । त्रिविका कुलपति केपी ओलीले उपकुलपतिलाई तुरुन्तै बोलाएर यो के भएको हो ? भनेर सोध्नु पर्ने थियो । पदबाटै बर्खास्त गर्नु पर्ने हो । विश्लेषक केसीले नैतिकता नेपालमा धेरै अघि नै समाप्त भएको बताए ।
महिला हिंसाको कारुणिक कथाः पतिव्रता सावित गर्न रक्त परीक्षा [भिडियोसहित]